Podiatrists Job incazelo / Imbopheleleko Template And Tasks – JobDescriptionSample.org
ekhaya / Akohlulwanga / Podiatrists Job incazelo / Imbopheleleko Template And Tasks
superadmin Isilimela 28, 2016 Akohlulwanga 1 Comment 713 Views
Spot kunye nokusingatha iingxaki kunye sengozini ze unyawo abantu.
Nokuxilonga ukuphazamiseka kwenyawo zokuqasha kwiindawo zonyango, -X-reyi, ihlolwe uqobo, kunye neziphumo zeemviwo clinical.
Cebisa imithi izixhobo okubuyisela, utyando uqobo Isisombululo.
Intsumpa ngayo iimeko kuquka eziguqula, calluses, nakwiinzipho ingrown, yamathumba, mfitshane imisipha corns, kunye amathumba.
Cebisa izigulane malunga amayeza kunye neendlela zonyango iinyawo eziyimfuneko ukuze ekulondolozeni kobunzima ukuba zingaba.
Khangela abantu oogqirha xa iimpawu iimpawu zokugula lwenkqubo, umzekelo seswekile okanye osteoarthritis, kuvandlakanywa ngeenyawo namathanga.
sengozini ezichanekileyo ngokusebenzisa ukutyabeka taping kunye ngumngundo.
Yenza uze utshatise izixhobo zakhe.
Phumeza imisebenzi admin ezifana umzekelo nokukhetha abasebenzi, izinto ordering, kwedatha nokulondoloza.
Yazisa uluntu jikelele malunga izinto ezinkulu malunga kwisiseko ingqalelo ngokusebenzisa amaqhinga ezifana umzekelo ukuthetha iziganeko, nentengiso, kunye neebhodi ukuba ezinye.
Handle sengozini kusetyenziswa iindlela mechanical, kuquka akho okanye izindlu zangasese zeparafini, kunye neendlela zombane, ezifana umzekelo elifutshane yomtshangatshangiso kancinci ombane zemimoya.
ithambo siphathane, imisipha, kunye nezifo ezidibeneyo eziphembelela imilenze neenyawo.
Occupation Imisebenzi Imiqathango
Ukufunda izivakalisi Isicatshulwa-Ukuqonda kunye nesiqulatho wabhalwa amaphepha umsebenzi ezinxulumene.
Active-Ukuphulaphula-Ukubonelela ulwazi yonke into abanye abantu okwangoku bathi, usebenzisa ixesha namandla ukuqonda nakhelwe izinto, imibuzo ezibuza ngendlela efanelekileyo, kunokuba kokuphazamisa afika ezingafanelekanga.
Publishing-Ibhalwe phantsi kungekhona nje ezingamfanelanga iintswelo abaphulaphuli ethetha ngempumelelo,.
Uxoxa-Ukuthetha nabanye ukuba ukwabelana izibakala kwamandla.
Maths-Isebenzisa maths ukuba ukusombulula iingxaki.
izisombululo Uphando-Ukusetyenziswa kunye nemigaqo-nkqubo zonyango ukusombulula imiba.
Criticalthinking-Ukusebenzisa ingqiqo nokuqiqa ukuba bayibone ubuthathaka kunye iitalente ngeendlela, iziphumo okanye izisombululo choice kwimiba.
ukubaluleka Active-Learning-Ukuqonda ulwazi olutsha ngokuphathelele kwezigqibo ingxaki ingxaki nganye ekhoyo elizayo kunye.
Learning Iindlela-Ukusebenzisa kwaye akhethe ubuchule trainingOReducational kunye unyango elifanelekileyo ekuqeqesheni imeko ethile, okanye xa sele uyincutshe ekudlaleni izinto ezintsha.
Tracking-Monitoring / Ukuhlola ukusebenza kwemibutho, abanye abantu, okanye wena ukuba ukuvelisa uphuhliso okanye uthathe amanyathelo olungiso.
Social Perceptiveness-Ukuba akukho abazi kwabanye’ nokwenzekayo ukusiqonda kutheni aphendula benza.
Dexterity-Ukutshintsha amanyathelo malunga nokuziphatha othersI.
Azithenge-biha abanye ukutshintsha ukuziphatha okanye iintloko zabo.
Ulamlo-Ukubonelela abanye ngokuhlangeneyo nokuzama ukwenza ibuya.
Ukufundisa-Ukufundisa abanye nje indlela yokwenza into ethile.
Orientation-Ngokugqibeleleyo Inkonzo izama ukufumana iindlela ukunceda abantu.
Advanced ukusombulula iingxaki-Ukumisela nobunzima phambili kwaye critiquing iinkcukacha ezinxulumene ukwakha apreyiza zizezinye nokusebenzisa iimpendulo.
Amashishini Uphando-Ukuqwalasela iimfuno lento kwaye ufuna ukwenza uyilo.
Engineering Design-Ukuba izixhobo okanye sokuvelisa neteknoloji ukuze sikhonze iminqweno ngabanye.
Gear Ukhetho-Echaza uhlobo kwezixhobo kunye nezixhobo ezifunekayo kakhulu ukwenza umsebenzi.
YoFakelo-Ukufaka kweentambo, iimveliso, izixhobo, okanye iipakethe ukufeza specs.
Ukhowudo-Publishing iipakethe kwikhompyutha ngokumalunga nezicelo ezininzi.
Umsebenzi iimvavanyo idayala Monitoring zokubukela, okanye iimpawu ezongezelelweyo ezibonisa ukuba siqiniseke kukho isixhobo isebenze ngokuchanekileyo.
Ukuqhuba imisebenzi iinkqubo okanye izixhobo Ukusingatha-Ukusingatha.
Isondlo-Kusetyenziswa nokuyicoca oko kuyinto eqhelekileyo kwizixhobo nokumisela nini kwaye yintoni uhlobo kulondolozwe kuyimfuneko.
Zokusombulula-Ukuchonga izinto ezibangela iimpazamo zokusebenza isigqibo ukuba uqhubeke njani ngalo.
izixhobo Ukulungisa-Ukulungisa okanye iinkqubo usebenzisa izinto ezidingekayo.
Ulawulo Quality Evaluation-Ukuzaliswa uvavanyo kunye nophando kweempahla, izisombululo, okanye amacebo ukuze alinganise umgangatho okanye ukusebenza.
Izigwebo, kwaye Decision Ukwenza-Thathela ingqalelo amaxabiso othelekiso kunye neenzuzo yamanyathelo wenkukuma khetha eyona efanelekileyo.
Uhlalutyo-Ukuchonga iimpawu njani ekubekeni, amashishini, kwakunye izigulo nokuba nefuthe neziphumo kunye nenkqubo kufuneka asebenze njani.
Systems Evaluation-Ukuchonga amanyathelo okanye nezalathisi zomsebenzi kwakunye zokuziphatha ezifunekayo ukuze kunyuswe okanye ukusebenza eyiyo, xa kuthelekiswa neenjongo device.
Ixesha-Management-Ukuphatha abanye’ ixesha yaye oneis nangexesha.
Administration of Savings-isigqibo imali iya kungekudala isetyenziswe njani ukuba umsebenzi ugqityiwe, kwaye ukugcinwa ngenxa yezi ndleko.
Imisebenzi ye Materials Kuko-Ukuqwalasela nokufumana ukuba ukusetyenziswa ezifanelekileyo eziluncedo, izixhobo, kunye namacandelo kwafuneka imfuneko ukwenza ethile asebenza.
abantu Ulawulo Abasebenzi Resources-phambili ngenxa yokuba, isakhiwo, nokukhuthaza ukusebenza, lalatha abantu abangcono kakhulu ukuba umsebenzi.
Imfuneko Career Umyalelo Skills
AchievementsANDAttempt – 92.26%
ukuzimisela – 94.70%
Initiative – 95.09%
Leadership – 90.09%
Assistance – 89.48%
Ingxaki Abanye – 91.82%
Orientation Cultural – 85.61%
pressure Tolerance – 91.58%
CustomizationANDFreedom – 87.84%
ithembeke – 88.08%
Jolisa aspect – 93.00%
Ethics – 94.20%
inkululeko – 90.43%
umtyali-mali – 87.09%
Thinking kohlaziyo – 90.89%
May 2, 2019 e 10:26 am